Bulelani: yintoni na | Abadali be-Intanethi
Encarni Arcoya | | Ukufota
Ngaphakathi kweefoto kukho iindlela ezininzi, izicwangciso kunye namaqhinga ukufumana isiphumo sobuchule kunye nesichukumisayo. I-Knolling, elisebe lokufota, iyakhula kodwa ababaninzi abazi kakuhle ukuba eli gama libhekisa kwintoni.
Ngesi sizathu, senze ukuhlanganiswa kolwazi ukuze wazi ukuba sithetha ngantoni kwaye, ngaphezu kwako konke, ukuze ufumane umbono wokuba yintoni na ubuchule, ukwenza njani kunye neminye imizekelo ebonakalayo. Ziphose kuyo?
1 Yintoni ukuguqa
1.1 Yintoni imvelaphi yobuchule
2 iintlobo zokunkqonkqoza
3 Indlela yokuziqhelanisa nokunkqonkqoza
4 Amanye amagcisa asebenzise iknolling kwimisebenzi yawo
5 Indlela yokuyisebenzisa ukubonisa iiprojekthi
Masiqale ngeyokuqala. Kwaye oku kukuqonda ngokugqibeleleyo ingqikelelo yokunkqonkqoza. Kodwa siza kuyenza ngendlela ebonakalayo. Yiya kwiAmazon okanye kwiAliexpress kwaye ukhangele ikiti yesixhobo.
Eyona nto ikhuselekileyo kukuba uninzi lweefoto lukubonisa ikhava okanye ibhegi kwaye ecaleni kwayo zonke iimveliso ezithwalwa yikiti, akunjalo? Yi indlela ebonakalayo yokubonisa umxhasi onokubakho yonke into abaya kuba nayo ukuba bayayithenga.
Ewe, obo buchwephesha bokufota abuyonto yimbi ngaphandle kwe-knolling, umahluko wokufota owaziwa ngokuba 'yizenithal isebubomi'.
Injongo yokunkqonkqoza ayikho enye ngaphandle kokubonisa uluhlu lwezinto, kodwa ezingabekwanga ngendlela engafanelekanga; okuphikisanayo, Kufuneka zilandelelwe kakuhle kwaye kwezinye iimeko "zigutyungelwe" ukuze kubonakale neyona nto incinci kubo.
Ukuba sichane ngakumbi, nganye yezinto kufuneka ibe kwi-90 degrees enye kwenye, ngendlela egqibeleleyo, enomtsalane, eyakhiweyo yoqobo eya kuthi ivele ngokungathandabuzekiyo.
Yintoni imvelaphi yobuchule
El umenzi wale ndlela yokufota akakho omnye ngaphandle kuka-Andrew Kromelow, umlindi othe wagqiba kwelokuba aodole zonke izixhobo zestudiyo sokwakha uFrank Gehry ukwenza umsebenzi ube lula kubasebenzi. Ke into awayenzayo kukuhlanganisa onke amaqhekeza elungelelanisa ubungakanani, imilo, njl. yaye ilungelelaniswe nganye kuzo kwi-engile yama-90 degrees.
Ngokucacileyo, washiya uluhlu lwemiyalelo, yingakho kwaziwa ukuba nguKromelow ngokwakhe owabhaptiza olu buchule njenge-knolling, kwaye wacacisa yonke into awayeyenzile, kunye nendlela ayenzile ngayo, into eyamangaza umyili wezakhiwo. Kodwa ngokuqinisekileyo kwamnceda ukuba alungelelane ngakumbi ukususela ngaloo mini ukuya phambili.
Emva kweminyaka, UTom Sachs, igcisa elalisebenza noGehry, waziswa kwi-knolling kwaye wagqiba kwelokuba athathe ingqikelelo yolo buchule ukwenza umzobo omhle owahlukileyo. Ngapha koko, kuyaziwa ukuba lo mzobi wasebenzisa ubuchule bomsebenzi wakhe edala i-manifesto, i-'Soloko unkqonkqoza' (ABK) apho wanika amanyathelo amane ekufuneka alandelwe ukuze aphumeze.
Ngoku ekubeni siyicacisile ukuba yintoni i-knolling kwaye yintoni imvelaphi yobu buchule, kuya kufuneka uyazi ukuba ngokuvela kwayo. Zimbini iindidi zokunkqonkqoza ziphumile:
Leyo idibanisa izinto ezahlukeneyo kodwa ezinxibelelene enye kwenye ngombono okanye ingqikelelo. Umzekelo, ikhithi yesixhobo ebesithetha ngayo ngaphambili, ekuvumela ukuba ube nezixhobo ezahlukeneyo (isikere, iintambo, imihlakulo, njl.njl.)
Lowo usekwe 'kwi-gutting'. Umzekelo wolu hlobo inokuba ngulowo wekhompyutha 'oyiqhekezayo' isiqwenga ngeqhekeza, ebonisa yonke into ukuya kutsho kwezona nkcukacha zincinci (iitshiphusi, izikrufu, amalungu, iintambo...).
Indlela yokuziqhelanisa nokunkqonkqoza
Njengoko besesikuxelele ngaphambili, UTom Sachs ukhuphe i-manifesto enamanqaku amane echaza indlela ekufanele kwenziwe ngayo ukunkqonkqoza. Kwaye ezo ngongoma zezi:
Fumana izixhobo, izixhobo, iincwadi... onazo ekhaya nezingasetyenziswanga.
Yilahle into engasetyenziswanga, kwanaleyo isenza singazithembi ukuba iyasetyenziswa okanye ayisetyenziswa.
Ezinye izinto kufuneka zidityaniswe ngobudlelwane. Oko kukuthi, kufuneka ufumane ikhonkco phakathi ngamnye wabo. Oko kuya kusenza senze amaqela.
Ngoku, kwiqela ngalinye, kufuneka ulungelelanise zonke ii-elementi kwii-engile ezichanekileyo, kwaye rhoqo kwindawo ethe tyaba.
Amanye amagcisa asebenzise iknolling kwimisebenzi yawo
Ukusukela oko kusenziwa ubuchule bokuknolisa, emva phayaa ngo-1897, bekukho amagcisa amaninzi athe awenza ukongeza kuTom Sachs.
Imizekelo yoku inokuba Todd McLellan, Austin Radcliffe, Ursus Wherli okanye Emily Blincoe. Zonke zineencwadi apho unokufumana khona imizekelo emininzi yeengoma zabo zobugcisa, iifoto kunye nobunye ubugcisa abathe bachitha ixesha elininzi kwi-knolling.
Ngokwenyani, kukho amawaka emifanekiso, okanye izigidi zazo, ezibonisa ezi ziqendu kwaye zinokuphumelela kakhulu xa kufikwa ekuthengiseni kwi-eCommerce, okanye kusetyenzwa nebranding ukubonisa uyilo olunokwenzeka kumxhasi.
Indlela yokuyisebenzisa ukubonisa iiprojekthi
Njengokuyila, xa iprojekthi isiza kuwe, kuya kufuneka uveze umbono wakho ngeyona ndlela ilungileyo kulo mxhasi. Kwaye ngamanye amaxesha uninzi lwezo projekthi zikuvumela ukuba udlale malunga nokuqamba kancinci.
Umzekelo, khawufane ucinge ukuba unomvelisi njengomthengi. Ukwenza umboniso oneenkcukacha zawo onke amacandelo imveliso enayo kunokunceda ukunika umbono wangaphambili ngakumbi kubathengi bakho. Kwaye kwangaxeshanye, ngokumela kakhulu, ngendlela ecwangcisiweyo kunye nombutho wemilimitha, igqame kakhulu kunokuba uyibonise kuphela ezinye iifoto zeemveliso ezivela kuzo zonke ii-angles ezinokwenzeka.
Omnye umzekelo unokuba kunye imisebenzi yophawu. Xa ucelwa ilogo okanye uyilo lophawu lomntu, ebonisa izinto ezininzi ezinaloo logo, njengohlobo lokuhlekisa, kodwa oluyalelwe ngobuchule beknolling lunika umoya wobungcali ngakumbi. Nokuba bebengakuxelelanga ukuba bafuna ukuyinika "inyani", okanye baya kuyisebenzisa eofisini okanye kwizinto zokuthengisa, ukuyibeka phambi kokuba inokubanceda babone isiphumo ngokulula ngakumbi kwaye banxibelelane naloo msebenzi owenzayo. ndenze.
Ewe, zilungiselele ukuba nerula ngesandla kwaye ujonge ukuba zonke iielementi zicwangciswe kakuhle kwaye zicwangciswe kwii-90 degrees ukuze ifoto kunye noyilo lokugqibela lube nesiphumo osilindeleyo.
Ngaba icacile kuwe ngoku ukuba yintoni ukunkqonkqoza?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukufota » Bulela: yintoni
Iilogo ezincinci zokuphefumlela